Tekken lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
mpankafy an'i Japoney ady lalao angamba efa nanomboka ny hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Tekken. Eto ny endri-tsoratra miady, mampiasa kapoka honed amin'ny fiofanana ary samy mampiseho ny Notsapaina sy nosedraina fahaiza-manao – Mamono manokana. Hampiharihary ny peratra ny iray amin'izy ireo, ary hitondra ny ady dia ahitana ny dimy fihodinana. Afaka handresy, very na hamarana ny lalao ao amin'ny antsapaka. Ary nisy mitambatra fanalahidy dia mampitondra ny nandravarava Mega hira, fa mitaky be dia be ny heriny ny mahery fo, ary dia ilaina ny nampiasa azy io toe-javatra mampidi-doza ihany. Ireo lalao no hanome anareo ny fampisehoana mahagaga ataony, ary ianao kosa ho ny tale.
Lalao Tekken tamin'ny Category:
Teto an-tany Kombat
Ny tsara indrindra Tekken lalao
Teto an-tany Kombat 2
Indray mandeha indray, ny ankizilahy dia hankafy ny ady nandritra ny lalao an-tserasera lalao Tekken
Lalao Online Rehetra Tekken lalao an-tserasera
izao tontolo izao ny olon-dozabe ny ady
mba hanazavana ny lazan'ny vokatra be ady mafy. Mba tafiditra karazana ity, tsy maintsy handratra azy. Angamba nanintona ny fihetsehana ny hetsika sy ny fialam-boly, tsy ampy ny olona ary maniry ny ho tahaka azy ireo. Ny sarimihetsika ady izay voaisy fipetrahana toy ny fampisehoana ny zava-drehetra izay no rava, famoretana, mahery fo tsy mampino manao SAINA FANETRI-BEN'NY, ary raha ny kapoka tokony ho namono ny miaramila, tsy nanao na dia grimaces amin'ny fanaintainana. Mazava ho azy fa izany rehetra izany horonan-tsary, ary izy ho ela ihany no latsaka eo amin'ny fiainana. Dia tena hafa sarimihetsika – ny mpilalao nandritra ny fotoana ela rangotra, ratra kely na dia tsy araka izay rehetra mandroaka ny sy ny fitokonana. Mijery ny mpikatroka, ny ankizilahy dia vonona ny hamerina ny feat. Izany fotsiny manokana batana dia tsy azo atao ny manohitra foana ny andian-jiolahy iray manontolo, ary ny iray tsy mahatsiaro ho toy ny mpihetraketraka mifampiresaka. Misy fomba iray Mbola – milalao ordinatera hetsika lalao, mpitifitra, miady lalao. Eto dia afaka mampihatra ny haiady araka izay ilaina, sy amin'ny ratsy indrindra tsy maintsy manomboka fotsiny ny ambaratonga raha resy indray.
Ny ohatra miavaka dia Tekken lalao, izay mahatonga ny orinasa Namco. Vokatra rehetra dia natao araka ny fomba ny ady sy ny mpilalao lalao dia afaka misafidy ny toetra amam-panahy izay eo ambany fitantanan'ny nandritra ny ady, miezaka ny ampitondraina fahavoazana eo amin'ny teboka ary handrava azy ara-batana. Games Tekken – Ohatra voalohany ny Genre. Rehetra mijery ny endri-tsoratra maro loko – amin'ny hozatra lehibe,-panjakana sy ny fanehoana an'ohatra miavaka endri-javatra ivelany. Dia manolotra fialamboly sy sary an-tsaina ny tenanao ho toy ny faran'izay mpiady.
Ny antsipiriany ny lalao Tekken
Games Free Tekken dia ahitana singa ny samy hafa haiady sy miady ny tenany dia mizara ho fihodinana, izay mety hiafara amin'ny fandresena, ny faharesena na ny antsapaka. Ny sasany miantehitra mahery fo afa-tsy ny herin'ny ny totohondry, sy nandritra ny ady izay manao fitaka manokana ho azy ireo. Afaka mahazo akaiky ny mpanohitra ka manindrona azy akaiky, izay mandray anjara manan-danja eo amin'ny fiainana. Any no hisy ny mitsambikimbikina, somersaults, dia mampandamòka. Endri-tsoratra hafa ampiasaina amin'ny ady amin'ny fitaovam-piadiana, ny sasany isan-karazany haiady nentim-paharazana. Ohatra, Yoshimitsu efitrano mahay fahavalo indray ka nahavoa ny lohany sy ny tahony ny sabatra ka mafy fa avokoa ny tena rehetra dia soritra an-tany. Raha toa ka miresaka momba ny tantara fohy, afaka lalao Tekken dia tsy tena mitovy amin'ny lalao toy izany koa niady lalao. Heihachi Mishima manambara ny Ady ny fifaninanana « Iron totohondry », izay dia ny mamaritra ny mpandresy. Iza no ho ny tsara indrindra, dia nomena ny anaram-boninahitra ara-bola ny tompony Mishima fanjakana sy ho tonga ny tompon'ny loka ny vola – lavitrisa. Rehefa reraka ao amin'ny lalao hilalao Tekken, dia tsy voatery hanakana ny teny fampidirana ity lohahevitra ity. Eo ny antony manosika ny ordinatera namorona ny lalao karatra mahafinaritra, manga ary entanin'ny ary naka sary ny endri-javatra horonantsary. Izany no mifanohitra amin'ny fomban-drazana – matetika ny mifanohitra amin'izany no mitranga rehefa ny lalao ho tonga mpanara-dia sinema sy Comics.